Ahoana No Canton Ara-Drariny 2020 Hatao?-Orinasa Fahalalana-FETON CORPORATION Co.,Ltd
Fototry ny jiro LED
Lahatsary jiro LED
Home>Resources>Fampahalalana momba ny orinasa
Ahoana no hitondrana ny kanto kanto 2020?
Fotoana: 2020-06-03 Hits: 669
Noho ny fihanaky ny valanaretina amin'ity taona ity, ny 127th Canton Fair, iray amin'ireo foibe ara-barotra lehibe indrindra eto an-tany, dia ho natao an-tserasera tamin'ny 15 ka hatramin'ny 24 jona.
Ity no fanavaozana lehibe indrindra sy fanamby ho an'ny mpividy, mpanao fampiratiana ary governemanta governemanta shinoa.
Avy eo amin'ny fomba ahoana no hanaovana ity Fair Canton ity? Inona no tokony hifantohana? Avia, fa hitady valiny!
1. Inona no atao hoe Canton Fair?
China Import sy Export Fair, voatonona ho toy ny Lemaka Kanto.
Soka manodidina ny fifanakalozana ara-barotra isaky ny Kantilianina $ 280 tapitrisa. Isaky ny kanto kanto, Mpandray anjara 180,000 from over 180 conutries ary hiara-mivory ny faritra mba hamokatra ny vokatra tsara indrindra avy any Shina hatreto Mpamatsy 60,000.
Tsy manitatra ny milaza fa hetsika ara-barotra iraisam-pirenena iray manontolo any Chine misy ny tantara lava indrindra, habe lehibe indrindra, karazan-java-bidy ary taham-bola avo indrindra.
3. Aiza ny Voaresy Mahitsy 2020?
Ny Fair Canton faha-127 dia hampiasa ny teknolojia fampahalalam-baovao mandroso mba hametrahana sehatra iray feno amin'ny Internet Tranonkala ofisialin'i Canton Fair.
Haneho ny fampahalalana ny vokatra an-tserasera amin'ny alàlan'ny lahatsoratra, sary, horonan-tsary, 3D, VR, fampitana mivantana, sns. Ny mpividy dia afaka mitsidika booth virtoaly amin'ny alàlan'ny sokajy fampirantiana, teny fanalahidy orinasa, laharana booth, sns.
Ny mpandray anjara tsirairay dia hanana 10×Efitrano fandraisam-bahiny 24 ora. Na ny fampirantiana dia afaka manao fifampiraharahana tokana amin'ny mpividy amin'ny Internet, na hampahafantatra ireo vokatra betsaka amin'ny mpividy amin'ny fotoana betsaka amin'ny alàlan'ny mivantana mivantana.
Ireo mpividy dia afaka mamoaka ny mombamomba ny fangatahana azy ireo ary mahita mpamatsy mifanentana amin'ny alàlan'ny sehatra. Ity sehatra ity dia manome fanohanana fandikan-teny maro samihafa hanamora ny serasera eo amin'ireo mpividy sy mpanentana.
50 faritra exihibiton,Sokajy 16 ny entana azo ampiasaina
Sokajy 6 momba ny entam-barotra, fitaovana elektronika & trano elektronika, BFitaovana uilding & Hardware, Fitaovana milina, Food & Misotroa, entana an-trano, lamba ary lamba vita amin'ny tokatrano.
Ireo mpampita entana dia afaka mampiasa kaonty fampirantiana mba hidirana amin'ny sehatra.
Ireo mpividy sy mpitsidika dia afaka miditra amin'ny sehatra fampirantiana an-tserasera amin'ny alàlan'ny tranokala ofisialin'ny Canton Fair.
Aorian'ny fisoratana anarana sy fidirana dia afaka mijery ny takelaka orinasa ny mpiranty, tsindrio ny mombamomba ny vokatra, mitsidika efitrano mivantana amin'ny orinasa, sns.
Nasaina tamim-pifandraisana ho an'ny Fetan Corporation Fitanisana amin'ny Sampan-tserasera Kantonianina nanomboka tamin'ny 15 jona ka hatramin'ny 24 jona. Nomeran'ny amboara: 13.2F38. Hiresaka momba ny teknolojia jiro sy tranga miaraka aminao izahay, eto izao ny fandaharam-potoanay:
Andro voalohany: FAHASALAMANA NY FAHAGANANA UVC Andro faharoa: UVC AIR STERILISATION Andro fahatelo: TEKNOLOHY LED Fahaefatra: FIVORIANA FAMPISORANA FAMPISORANA sy ANIMALY Andro fahadimy: Andro FAHORIANA FAHAGAGANA FAHADIANA: FIVORIANA ANARANA FAHAROA FAHA-XNUMX: PROJEKIANA FAHAGANANA Andro efatra: FIVORIANA FAMPISEHOANA AN-TRANO: FIVORIANA FAHADIANA FAHATELO Faha-enina: ANKANA FAMPISEHOANA Andro Faha-XNUMX: FAMPISORANA FAMPISEHOANA AN'ANDRIAMANITRA: FIVORIANA FAMPISEHANA FIVORIANA INDRINDRA FANAO FAHAFATANA: ATSIKA FOTOTRA
Fahalalana mifandraika -
Fa maninona ireo ankamaroan'ny jiro UV germicidal eo amin'ny tsena dia tsy mahomby?
Next: Ny fahatsiarovan-tena momba ny serivisy: Ahoana ny fitantanana sy fifehezana ny fivoriana amin'ny fomba mahomby?
Tratra faha-13, mpitarika iraisam-pirenena mpitarika, lah. 42 Wenming West Rd, Shunde, Guangdong, Sina
Copyright © 2019 FETON CORPORATION Co, Ltd Zo rehetra voatokana.